Maroalopoty - Wikipedia
Isam-ponina 16 030 mponina
Maroalopoty dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Ambovombe, Faritanin'i Toliary. Ny isam-poniny dia 16030 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 51606 ary ny kaodin-distrika dia 516
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia autres pois. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia mangahazo. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia mais. Ny isan'omby dia 25600. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia patate douce. Ny entana lafo vidy indrindra dia voanemba. 50 ny mponina no miasa tany. 15 ny mponina no miasa amin'ny fanjonoana. 34 ny mponina no miasa amin'ny fiompiana. 1 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia charrette. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 6 ora. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 6 ora. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 20000 Fmg. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny haintany dia 20000 Fmg.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Maroalopoty&oldid=798064"